RASMI: Liverpool Oo Daqiiqado Gudahood Ku Diiday Dalab 100 Milyan Sh Oo Ay Barcelona Ka Soo Gudbisay Philippe Coutinho – WWW.Gool24.net
RASMI: Liverpool Oo Daqiiqado Gudahood Ku Diiday Dalab 100 Milyan Sh Oo Ay Barcelona Ka Soo Gudbisay Philippe Coutinho
Kooxda Liverpool ayaa markale muujisay in ayna hadal kaliya ahayn diidada adag ee ay ku doonayso in Philippe Coutinho aanu kooxdeeda ka bixin waxayna daqiiqado gudahood ku diiday dalabkii labaad ee rasmiga ahaa ee ay Barcelona ka soo gudbisay xidiga ree Brazil. Kadib wafti ka socday Barcelona oo England soo gaadhay, waxayna Baluagrana dhigeeda Liverpool miiska u saartay dalab horumarin lagu sameeyay oo 100 milyan oo euros ah si ay u hesho saxiixa Coutinho.
Sky Sports News ayaa shaaciyay in Barcelona ay sarre u qaaday dalabkii kowaad oo ahaa 72 milyan gini kaas oo ay Liverpool hore 18 daqiiqo gudahood ugu diiday laakiin dalabka laabad ee ay Barcelona shalay soo gudbisay ayaa ku qiimaysnaa 85 milyan euros oo qidimaad ah iyo 15 milyan oo euros oo qaab ciyaareedka xidigan ku xidhnaan lahaa taas oo isku dar ka dhigaysa 100 milyan euros laakiin markale daqiiqado kadib Barcelona ayaa heshay jawaab adag.
Sky Sports News ayaa sheegay in Liverpool ay hadda aaminsan tahay in diidmada qayaxan ee ay markii labaad u muujisay Barcelona ay soo xidhin karto albaabka Coutinho. Barcelona ayaa si adag u raadinaysa badalkii Neymar Jr kaas oo 222 milya euros ugu biiray kooxda PSG.
Laakiin Liverpool gaar ahaan tababare Jurgen Klopp ayaa meel aad u adag iska taagay arinta Coutinho isaga oo xataa shalay iska diiday in wax laga waydiiyo kadib markii uu muddo dheer hal jawaab oo kaliya uu soo bixinayay. Coutinho ayuu shaki ku jiraa in uu seegi karo kulanka Watfrod ee furitaanka Premier Leaque kadib dhabar xanuun ku soo gaadhay kulankii Bayern Munich.
Barcelona ayaa markii hore qorshaysatay in Philippe Coutinho uu kooxdeeda qayb ka noqdo marka ay axada Camp Nou ku wajahayaan Real Madrid ee kulanka lugta hore ee Spanish Super Cupka laakiin Liverpool ayaa wali taagan halkii ay markii ugu horaysay iska taagtay bixitaanka Coutinho.